Enwere mmiri ọgwụ na osisi
Kin Tat Hydraulic Elev Dam Dam Project
Iwu Iwu Yanji
Anglọ Ọrụ Na-eweli Mmiri Fangcheng
Lanxi Hydropower Station HED oru ngo (Rubber Dam rec ...
Shouzhou Ecological Environment Comprehensive ọgwụgwọ ...
Tongren Hydropower Station Iju Mmiri Control Ọrụ Renovation Project
Ngwa: Njikwa Iju Mmiri, Ọdụ ike Hydroelectric
Ọnọdụ: Guizhou, China
Simplified Elevated Dam (SED) bụ ụdị dam nke ọhụrụ nke na-eji mgbapụta hydraulic ntuziaka ma ọ bụ injin diesel iji chịkwaa oghere na ala maka ijigide na ịchụpụ mmiri. Ihe ohuru ohuru nke nnukwu ihe eji agbapu aka na igwe na achoghi oku eletrik. SED dị mkpa karịsịa maka enweghị mpaghara eletrik na ụsọ oké osimiri. Ka ọ dị ugbu a, a bulie ya nke ọma na Myanmar, Bangladesh, Vietnam na mba ndị ọzọ.
Hydraulic lifvator dam, nke BIC nyochara ma mepee, bu ihe ohuru ohuru na sayensị na teknụzụ. Ọ bụ ihe jikọtara nke ọma nke hydraulic "usoro ihe atụ atọ nwere isi" na ihe ọdịnala ọdịnala. Hydraulic cylinders na-akwado na azụ nke panel
ibuli ọnụ ụzọ ámá maka igbochi mmiri ma ọ bụ ịdapụ ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụrụ na idei mmiri emee. Ọ metụtara na ọnọdụ mmiri na mbara ala dị iche iche; a na-eji ya eme ihe na mbara ala mmiri, nchekwa nke mmiri mmiri, njedebe nke ike mmiri na nchekwa mmiri ọzọ＆ ike mmiri, mmepe anya mmiri na mmepe obodo. Nkà na ụzụ aenwetala usoro ihe ntinye nke ndi State of intellectual Property Office nke PRC weputara na 2014 Ndeputara Key Promotion na Guiding for Advanced Water Conservancy Practical.
Okwu mgbochi Okwu Rubber
Ntinye Rubber Okwu Mmalite Okwu mgbochi mmiri bụ ụdị hydraulic ọhụrụ dị iche iche ma jiri ya tụnyere ọnụ ụzọ ámá ígwè, ma jiri akwa akwa siri ike na-agbakwunye roba, nke na-etolite akpa roba na-adabere na ala nke dam. Na-ejuputa mmiri ma ọ bụ ikuku n'ime akpa mmiri ahụ, a na-eji mmiri roba egbochi mmiri mmiri. Ikpofu mmiri ma ọ bụ ikuku site na akpa mmiri ahụ, a na-eji ya ahapụ ntọhapụ mmiri. Ọdụ mmiri Rubber nwere ọtụtụ uru ma e jiri ya tụnyere weir, dị ka ọnụahịa dị ala, usoro hydraulic dị mfe, obere ihe ...
Okwu Mmalite nke osisi eji edozi mmiri
Okwu Mmalite nke Osisi Ọgwụ Na-ekpuchi Mmiri Na-ekpuchi Ọgwụ bụ ngwaahịa na-emepụta ọkọlọtọ nke Beijing IWHR Corporation (BIC) mepụtara. ọ bụ iji mesoo obere mmiri. A na-ekewapụta Ogwe Ọgwụ Mmiri nke dị na ụdị usoro abụọ dị iche iche: (1) Otu bụ ọgwụgwọ mmiri mmiri maka iji mee ihe ọzọ: (2) Nke ozo bu ime ka mmiri di ocha; (Containerized Water ọcha Osisi) ...
Ebumnuche: Iji nye ihe ngwọta kachasị mma maka ọrụ ọgwụgwọ mmiri.
Iji nye akụrụngwa ọgwụgwọ mmiri dị oke ọnụ.
Iji mee ka ndị mmadụ n'otu n'otu nwee mmiri dị ọcha na nke dị mma.
Uru: elitụkwasị Obi Nnọọ na Teknụzụ Ndị mmadụ na-adabere
Njirimara：1.Optimized usoro / ngwọta
2.High arụmọrụ na kacha mma na-eri-irè
3.High arụmọrụ / Ike ike
4.High pụrụ ịdabere na ya / Ogologo ndụ
5.Simple ọrụ na obere mmezi
6. Obere akara ukwu / ntụkwasị obi
7.Nzube nke "nka nke n'ichepụta"
ya na akuko ahia na-ekpuchi nyocha oru, oru na ngwa; mmepe ngwaahịa, mmepụta, ire ahịa na nkwalite, yana iwupụta ọrụ dị mkpa; na ire ahia na ụlọ ọrụ teknụzụ na ngwaahịa.
Otu esi emeso ịta ahụhụ polarizati ...
Anya mmiri oru ngo maka nchekwa ...
Gbanwee osmosis mmiri pretreatment Ọdịdị
June 2019 Employer gaa Bhora HED Pilot ...
July 2019, BIC gara Ministry nke Agric ...